ဖိုင်စနစ်များ - ကျွန်ုပ်၏ disk များနှင့် Linux ရှိအခန်းကန့်များအတွက်မည်သည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
ဖိုင်စနစ်များ - ကျွန်ုပ်ရှိ Linux နှင့်ကျွန်ုပ်၏ disk များနှင့်အခန်းကန့်များအတွက်မည်သည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။
လက်ရှိတွင် လည်ပတ်မှုစနစ်များ အပေါ်အခြေခံပြီးအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း GNU / Linux များ ကျယ်ပြန့်ကိုထောကျပံ့ ဖိုင်စနစ် (ဖိုင်များ)လူသိအများဆုံးနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်လက်ရှိဖြစ်သည် EXT4.
ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကန့်များ၊ disk များ၊ အော်ပရေတာစနစ်များနှင့်ကွန်ပျူတာများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သင့်သလော။ တစ်ခုမှာတစ်ခုထက်ပိုပြီးဘာကောင်းကျိုးရှိသလဲ။
ငါတို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအများဆုံးအသုံးများနှင့်လူသိများဖြစ်နိုင်ခြေ ဖိုင်ထားသိုစနစ် အပေါ် GNU / Linux များလက်ရှိဖြစ် EXT4။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
"... ငl Extended file system (EXT) သည် Linux Operating System အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောပထမဆုံးဖိုင်စနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Remix Card မှ MINIX File System ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွှားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို EXT2 နှင့် Xiafs နှစ်မျိုးလုံးကအစားထိုးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်ရေရှည်ရှင်သန်နိုင်မှုကြောင့် ext2 နောက်ဆုံးတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။".
ဆိုလိုသည်မှာ EXT ဖိုင်စနစ်မင်းနီးလာပြီ 30 အနှစ် ဖြစ်ပေါ်နေသော။ မှ 1 ခုနှစ်တွင်ဗားရှင်း 1992သူ့မှတဆင့်သွား2ခုနှစ်တွင်ဗားရှင်း 1993သူ3ခုနှစ်တွင်ဗားရှင်း 2001ခေတ်သစ်အထိ ဖိုင်စနစ် EXT4 အဲဒါဖြန့်ချိခဲ့သည် ယခုနှစ် 2008 ၌တည်၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ထို အချိန်မှစ၍ အခြားဖိုင်စနစ်များစွာသည်ဘဝကိုလက်ရှိစနစ်နှင့်အစားထိုးခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသည် EXT4 ထင်ရှားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အတူ။
1 GNU / Linux ပေါ်ရှိဖိုင်စနစ်များ
GNU / Linux ပေါ်ရှိဖိုင်စနစ်များ
တစ်ခုချင်းစီ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါမည်၊ သို့မှသာအမှုတစ်ခုစီတွင်မည်သည့်အရာက ပို၍ အဆင်ပြေမည်ကိုသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်။
သူသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
EXT3 အဟောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ စာဖတ်နှုန်းနှင့်စာဖတ်နှုန်းမြန်လာသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောဖိုင်စနစ်များ (1EiB = 1024PiB အထိ) ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးကြီးမားသောဖိုင်များကို (16TB အထိ) ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပိုမိုတိကျသောဖိုင်နေ့စွဲအချက်အလက်များကိုပေးသည်၊ CPU အသုံးပြုမှုနိမ့်သည်။
၎င်းသည် Transactional File System ဖြစ်သည့် EXT စီးရီး၏ဒုတိယဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်များသို့မဟုတ်ဂျာနယ်မှတ်တမ်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်ယန္တရားတစ်ခုရှိသည်။ မအောင်မြင်ဘူး
၎င်းတွင် "Extent" အထောက်အပံ့ရှိသည်။ "Extent" သည် EXT 2/3 ဖိုင်စနစ်များအသုံးပြုသောရိုးရှင်းသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုအစီအစဉ်ကိုအစားထိုးသည်။ Extent ဆိုသည်မှာ File System အနေဖြင့်ကြီးမားသောဖိုင်များနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် fragmentation ကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်တဆက်တည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ကွက်များဖြစ်သည်။
၎င်းနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များသည်အိမ်သုံးကွန်ပျူတာများနှင့်ရုံးသုံးအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဖိုင်စနစ်ကိုအထူးအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်း၏ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများသည်သာမာန်အသုံးပြုသူများဖြစ်သောသာမာန်အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုအများဆုံးအတွက်လုံလောက်သည်။ ၀ ယ်လိုအားနည်းမှုနှင့်လည်ပတ်မှုနည်းပါးသောဆာဗာများတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
၎င်းတွင်ထူးခြားသောသွင်ပြင်များစွာရှိသော်လည်း၎င်းကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ချဲ့နိုင်သည် kernel.orgနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အထူးဆောင်းပါး၌တည်၏ opensource.com ဖြစ်သည်.
XFS သည် UNIX ပလက်ဖောင်းအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဂျာနယ်ဖိုင်စနစ်များ၏ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို SGI ကုမ္ပဏီ (ယခင်က Silicon Graphics Inc. ) ဟုခေါ်ပြီး ၁၉၉၄ တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်. ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မေလတွင် SGI သည်အရင်းအမြစ်လိုင်စင်ဖြင့် XFS ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းကို Linux တွင်ဗားရှင်း 2000 မှထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ XFS သည်ဖိုင်ဘိုက်စနစ်အား exabytes ၉ ခုအထိ၊ 2.4.25 bits အတွက်နှင့်9terabytes ၁၆ ခုအတွက် 64 system အတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်။
XFS သည်ဂျာနယ်လစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဖိုင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၄ င်းသည်ခိုင်မာပြီးအဆင့်မြင့်သည့် 64-bit ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝကိုအခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောဖိုင်များနှင့်အလွန်ကြီးမားသောဖိုင်စနစ်များကိုထောက်ပံ့သည်။ XFS စနစ်ပါ ၀ င်နိုင်သောဖိုင်အရေအတွက်သည်ဖိုင်စနစ်ရှိသည့်နေရာမှသာကန့်သတ်ထားသည်။
XFS သည် metadata ဂျာနယ်များကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်မတော်တဆမှုများမှမြန်ဆန်စွာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။ XFS ဖိုင်စနစ်များကိုတပ်ဆင်ပြီးတက်ကြွနေစဉ်တွင်လည်း defragmented နိုင်သည်။
၎င်းနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များသည်ဆာဗာတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ဖိုင်စနစ်နှင့်အတူတူပင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်နှင့်ပါ ၀ င်သည့်ဒေတာများကိုပိုမိုကြံ့ခိုင်သောယန္တရားများလိုအပ်သောမြင့်မားသော ၀ ယ်လိုအားသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတို့ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ကြီးမားသော disk ကို read / write load, standalone type databases သို့မဟုတ် shared webhosting operations များကိုအခြား application များမှကိုင်တွယ်သောဆာဗာများ။
၎င်းတွင်ထူးခြားသောသွင်ပြင်များစွာရှိသော်လည်း၎င်းကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ချဲ့နိုင်သည် Redhat.com မှနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အထူးဆောင်းပါး၌တည်၏ en.qwe.wiki.
Btrfs (B-Tree FS) သည် Linux အတွက်ခေတ်မီဖိုင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာအမှားသည်းခံမှု၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူစွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုအာရုံစိုက်ပြီးအဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
၎င်းကိုကုမ္ပဏီများစွာမှပူးတွဲတီထွင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် GPL လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိပြီးလိုင်စင်ရရှိထားပြီးမည်သူမဆိုထည့်ဝင်ရန်ဖွင့်သည်။
သိုလှောင်ခန်းကြီးများကိုစီမံရန်နှင့် disk တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာများအတွင်းရှိအမှားများကိုရှာဖွေရန်၊ ပြုပြင်ရန်နှင့်သည်းခံရန်၎င်းတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
Btrfs သည် Copy-on-Write (CoW) ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဖတ်နိုင်မှသာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သောလျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်များကိုခွင့်ပြုသည်၊ ကိရိယာမျိုးစုံဖိုင်စနစ်များအတွက်ဇာတိထောက်ခံမှုနှင့်အသံအတိုးအကျယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အချက်အလက်များ (ဒေတာနှင့် metadata) များကိုစစ်ဆေးရေးစင်တာများမှကာကွယ်သည်။စစ်ဆေးရေးစခန်း), compression ကိုပံ့ပိုးသည်, SSD ကို drives တွေကိုများအတွက် optimization, သေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေ၏ထိရောက်သောထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်များစွာသော။
Btrfs codebase သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောက်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တည်ငြိမ်။ မြန်ဆန်စွာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးမည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုအသုံးဝင်သည်။ အလျင်အမြန်တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ Linux ၏ဗားရှင်းအသစ်တိုင်းနှင့်အတူသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုပါကဖြစ်နိုင်သမျှနောက်ဆုံးပေါ် kernel ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးသည်။
ဤနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Workstations နှင့် Servers များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအထူးသဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုံခြုံရေး.
၎င်းတွင်ထူးခြားသောသွင်ပြင်များစွာရှိသော်လည်း၎င်းကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ချဲ့နိုင်သည် kernel.orgနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အထူးဆောင်းပါး၌တည်၏ elpuig.xeill.net.
အနားယူပါ GNU / Linux များ အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်အခြားစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ် Non- ဇာတိဖိုင်စနစ်များ, ထိုကဲ့သို့သော disk များနှင့် partitions ကိုအဘို့ FAT32, exFAT နှင့် NTFS de ကို Windows, HFS + နှင့် AFS de Apple။ ဖိုင်စနစ်များ F2FS၊ UDF နောက် exFAT ပြင်ပသိုမဟုတ် flash သိုလှောင်ခန်း (disk) များအတွက်ဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်တွေလိုပါပဲ NFS (Linux စက်များအကြားအရင်းအမြစ်များကိုဝေမျှလေ့ရှိသည်) သို့မဟုတ် SMB (Linux နှင့် Windows စက်များအကြားအရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေရန်) ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အကြောင်း «Sistemas de archivos»ငါတို့၌တည်၏ «Distros GNU/Linux» ငါတို့အဘို့အမှန်ကန်သောတစ်ခုဖြစ်သည်ပိုကောင်းသိရန် «discos o particiones»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » ဖိုင်စနစ်များ - ကျွန်ုပ်ရှိ Linux နှင့်ကျွန်ုပ်၏ disk များနှင့်အခန်းကန့်များအတွက်မည်သည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။
Miguel Mayol Tur ဟုသူကပြောသည်
XFS နှင့် BTRFS ကိုခွင့်မပြုပါ
ဟုတ်တယ် EXT4 ဟုတ်တယ်။
ယခုတွင်ငါသည် XFS နှင့် EXT4 ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသော XFS ၏အားသာချက်မှာနွေရာသီတွင်အပူလျော့နည်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နွေရာသီတွင်အပူနှင့်အတူအများဆုံးရေးသားနိုင်သောအခန်းကန့်ကိုဖျက်ဆီးလေ့ရှိပြီး XFS သို့မပြောင်းလဲတော့ပါ
ဒါပေမယ့် EXT4 ရဲ့ "အရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်း" စွမ်းရည်နှင့်အခြားသူများနှင့်မဝေးသောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်နှလုံးသားရခဲ့သည်။
Miguel Mayol Tur သို့ပြန်သွားရန်
Miguel ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံမှမှတ်ချက်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ root partition အတွက် BtrFs ကို သုံး၍၊ ကျွန်ုပ် / home partition အတွက် XFS ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။
ယခင်၏, ငါမဆို update ကိုသို့မဟုတ် "fiddling" မှားယွင်းနေလျှင်, ငါ Snapper နှင့်အတူယခင်ပြည်နယ်မှပြန်ပြောင်းဖို့ရှိသည်သောစွမ်းရည်ကိုချစ်။
မင်္ဂလာပါ, Dhouard ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံမှသင်၏ထင်မြင်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Alfonso Barrios D ဟုသူကပြောသည်
ထုတ်ဝေရန်အလွန်ကောင်းသော်လည်းသင် linux ဖိုင်စနစ်၏အားသာချက်များကိုဖော်ပြရန်အချိန်ယူပါက windows နှင့် Apple ဖိုင်စနစ်များ၏အားသာချက်များကိုသင်အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်သည်။
ကျန်တဲ့ post ကိုကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တယ်။ အရမ်းရေးထားတယ်
Alfonso Barrios D. အားပြန်ကြားခြင်း
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်, Alfonso ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သေချာတာပေါ့, သူတို့ကိုထည့်သွင်းရန်မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါဟာsurelyကန်အမှန်ဤ post ကိုတစ် ဦး update ကိုအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
အမျိုးသမီးများ၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် - မတ်လ ၈ ရက်ပျော်ရွှင်ပါစေ!
pppd တွင် bug ကိုတွေ့ရှိပြီး၎င်းကိုကုဒ်အနေဖြင့်အဝေးမှအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်